နေအိမ်/Windows ကို 10/Windows 10 တွင်ပုံနှိပ်စက်ကိုသတ်မှတ်ပါ
Vangelis8 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
Windows 10 ဖြင့် သင်သည် ပုံသေပရင်တာကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင့်တွင် ပရင်တာတစ်ခုထက်ပို၍ ထည့်သွင်းထားသော်လည်း အများစုမှာ ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုပါက၊ ထိုပရင်တာကို မူရင်းပရင်တာအဖြစ် သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်တင်များတွင် ကြည့်ရှုပါက ပရင်တာများအောက်တွင် အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပရင်တာများမဟုတ်ပေ။ ဥပမာ Microsoft မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ PDF ဖိုင်ရယူရန်၊ Windows XPS Documennt Writer၊ Fax နှင့် သင်တန်းတွင် သင်၏ ထည့်သွင်းထားသော ပရင်တာ။ သင့်ပရင်တာကို ပုံသေပရင်တာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ပရင်တာတစ်ခုကို အကြိမ်တိုင်း ရွေးချယ်စရာမလိုဘဲ သင့်စာရွက်စာတမ်းများကို ချက်ချင်းပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် ပုံသေပရင်တာ သတ်မှတ်နည်းကို သင့်အား ပြသပါမည်-
စံပရင်တာကို သတ်မှတ်ရန် Windows ကို 10 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် ဖြတ်လမ်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ Windows ကို + I ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ Windows ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဆက်လုပ်ပါ setting များကို
ပုံနှိပ်စက်ကိုနှိပ်ပါ ပုံနှိပ်စက်ပုံသေ ဖြစ်သင့်သည်နှင့်ကလစ်နှိပ်ပါ စံအဖြစ်။
ပုံသေပရင်တာကို control panel မှတဆင့်သတ်မှတ်ပါ
Windows 10 ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် ပုံနှိပ်စက်ပုံသေ control panel မှတဆင့်လည်းသတ်မှတ်သည်
ဖြတ်လမ်းကီးကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + X နှင့်ရွေးချယ်ပါ ထိန်းချုပ်ရာနေရာ
ဒုက္ခသစ္စာ အရွယ်အစား အထိမ်းအမှတ် ကိုနှိပ်ပါ ကိရိယာများနှင့်ပရင်တာ.
ဖြင့်နှိပ်ပါ ညာဘက် mouse ခလုတ် သင်ပုံသေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုသောပရင်တာပေါ်တွင်၎င်းကိုရွေးပါ ပုံသေပရင်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ
Windows 10 Dark Theme ကိုသော့ဖွင့်ပြီးသုံးပါ
Windows 10 ကို backup လုပ်ထားပါ
Windows 10 - မျက်နှာပြင်အပြည့်တွင် start menu ကိုပြပါ
Windows 10 ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ထားပါ
Windows 10 အသံဖမ်းစက်
Windows 10 ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုပြပါ။
Windows 10 data limit ကိုသတ်မှတ်ပါ
Windows 10: Cortana သည်အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ
Windows 10 ထပ်တိုး "Shortcut" ကို desktop မှဖယ်ရှားပါ
ဆုံးဖြတ်သည် Windows ကို ပြတင်းပေါက် 10
Windows 10 ဗီဒီယိုများလှည့်ကွက်နည်းလမ်းများပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်းများ။ သင် Windows 11 အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင်၏ Windows ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသုံးဝင်သောညွှန်ကြားချက်များ၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများနှင့်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Amazon ပါတနာအနေဖြင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ Amazon လင့်ခ်ကို သင်နှိပ်ပါက အရည်အချင်းပြည့်မီသော အရောင်းမှ ရရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ အခြားသူတွေကဒီ site ကိုနှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေချိန်တွင်သူတို့ထဲကတချို့က, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် 16 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးရန် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုပါက၊ သင်၏တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် cookies နှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးသော်လည်း အချို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည် (ဥပမာ IP လိပ်စာများ)၊ ဥပမာ။ B. စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာနှင့် အကြောင်းအရာ တိုင်းတာခြင်းအတွက်။ သင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ. အောက်တွင် သင့်ရွေးချယ်မှုကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ setting များကို ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိပါ။
အကယ်၍ သင်သည် 16 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးရန် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုပါက၊ သင်၏တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် cookies နှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးသော်လည်း အချို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည် (ဥပမာ IP လိပ်စာများ)၊ ဥပမာ။ B. စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာနှင့် အကြောင်းအရာ တိုင်းတာခြင်းအတွက်။ သင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ. အောက်တွင် သင့်ရွေးချယ်မှုကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ setting များကို ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိပါ။ ဤနေရာတွင်သင်အသုံးပြုသော cookies အားလုံး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်အမျိုးအစားတစ်ခုလုံးကိုသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပြသနိုင်ပြီးအချို့သော cookies များကိုသာရွေးချယ်နိုင်သည်။
အားလုံးကိုလက်ခံပါ သိမ်းဆည်းရန် သာမရှိမဖြစ် cookies တွေကို Accept
ဒီ site ၏ပိုင်ရှင်များ, နှိပ်ရာ
Google Ireland Limited၊ Gordon House၊ Barrow Street၊ Dublin 4၊ အိုင်ယာလန်
Meta Platforms Ireland Limited၊4Grand Canal Square၊ Dublin 2၊ Ireland
Openstreetmap ဖောင်ဒေးရှင်း၊ St John's Innovation Center၊ Cowley Road၊ Cambridge CB4 0WS၊ United Kingdom
Twitter International ကုမ္ပဏီ၊ One Cumberland Place၊ Fenian လမ်း၊ Dublin 2၊ D02 AX07၊ အိုင်ယာလန်
Vimeo Inc.၊ 555 အနောက် 18 လမ်း၊ New York၊ New York 10011၊ USA